Muxuu Antonio Conte ka yiri kaddib markii Inter Milan ay hoggaanka u qabatay horyaalka Talyaaniga? – Gool FM
Muxuu Antonio Conte ka yiri kaddib markii Inter Milan ay hoggaanka u qabatay horyaalka Talyaaniga?
(Milano) 15 Feb 2021. Tababaraha kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii ay kooxdiisu ka gaadhay Lazio kulankii xalay ee horyaalka Talyaaniga.
Inter Milan ayaa garoonkeeda Giuseppe Meazza guul weyn kaga gaartay kooxda Lazio, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, waxaana Nerazzurri goolasha u kala dhaliyay xiddigaheeda Romelu Lukaku oo 2 gool ah iyo Lautaro Martinez.
Haddaba wargeyska “Football Italia” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Antonio Conte ciyaarta kaddib waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Inaan kor ugu kacno miiska kala sareynta horyaalka waxay aheyd ujeed aan daba soconay muddo dheer, taas oo ah waxa aan maanta gaarnay kaddib ciyaar aan la ciyaarnay koox aad u xoogan.”
“Waxaan u hambalyeynayaa Lazio iyo Simone Inzaghi, waa koox xoogan, abaabulan oo leh tayo badan.”
“Runta waxay tahay inay ciyaareen kulankan kaddib lix guul oo xiriir ah, taasoo muujineysa awoodooda, laakiin isla waqtigaas waxay muujineysaa awooddeena maskaxeed.”
“Waan ognahay in kulanka soo socda aan la ciyaari doono kulanka Milan, waxaan aadi doonaa kulanka anaga oo ka fiican sidii hore, waxay noqon doontaa ciyaar aad u fiican ee dhex mari doonta labo kooxood ee leh rajo xoogan.”
Si kastaba ha noqotee, Inter Milan ayaa ku hoggaamineysa kala sareynta horyaalka Talyaaniga 50 dhibcood, waxayna hal dhibic ka sareysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee AC Milan oo leh 49 dhibcood.
Mikel Arteta oo ka hadlay guushii weyneyd ay kooxdiisa Arsenal ka gaartay Leeds United